I-Camp Chilnualna Riverside Cabin 7 eYosemite - I-Airbnb
I-Camp Chilnualna Riverside Cabin 7 eYosemite
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Garth
U-Garth Ungumbungazi ovelele
Inani nendawo kwenza #7 ikhabethe lethu elidume kakhulu. Izinyathelo nje ukusuka kuMfula iMerced kaYosemite. Izingane/izilwane ezifuywayo zidlala ngokuphephile ku-culdesac yangasese. Amagumbi okulala angu-2 nokugeza oku-w/ubhavu neshawa, ikhishi, i-wifi, indawo yangasese e-w/2 BBQs, nokubuka okungcono kakhulu kwe-wawona dome nomfula.
Intengo nendawo kwenza #7 ikhabethe lethu elidume kakhulu. Izinyathelo nje ukusuka emfuleni iMerced kaYosemite. Izingane/izilwane ezifuywayo zidlala ngokuphephile ku-culdesac yangasese. Amakamelo okulala angu-2 neshawa, ikhishi, i-wifi, i-propane BBQ yesitezi esizimele, kanye nokubuka okuhle kwe-Wawona dome & South fork of the Merced river.
NgoJuni kuya ku-Agasti sinenani eliphansi lobusuku obu-3 kanye namaholide. Hlola nathi ngokutholakala njengoba ngezinye izikhathi singakwazi ukuhlalisa ubusuku obu-2 ngalezi zikhathi. Ngiyabonga ngokuqondisisa.
Umbhede owodwa wendlovukazi ekamelweni ngalinye.
Igumbi lokuphumula linosofa wokulala.
Le Khabhinethi isendaweni ethule, yangasese, kude nomsindo womgwaqo.
• Isiqandisi esinefriji
• Isitofu segesi esinohhavini
• Umshini owakha ikhofi
*AMANZI mahle kakhulu ekhabetheni. Sicela ulethe iziqukathi zakho ezisebenziseka kabusha futhi uzigcwalise ngaphambi kokuthi uhambe uhambo lwakho lokuzidela. Asikho isidingo sokuletha amanzi asemabhodleleni ngepulasitiki.
Izinsiza Zangaphandle emphemeni
• I-BBQ - I-Gas Grill (i-propane inikeziwe)
• Ukubuka kwe-Wawona Dome
Izinsiza Zegumbi Lokuphumula
Ukushisisa noma Ukupholisa
• Abalandeli beCeiling
• Izifudumezi Zamadonga
• Omakhalekhukhwini be-Verizon & Sprint banokufaka ngokugcwele, sebenzisa (iwebhusayithi ifihliwe) biza ikhompuyutha yakho noma i-smart phone uma ungenazo lezi zinsizakalo, njengoba kungekho okunye okutholakala kwezinye izinkampani zamaselula.
• Akukho Ukubhema Okuvunyelwe
Okwezivakashi ezinezilwane ezifuywayo:
-Izilwane ezifuywayo zamukelekile ngesaziso esithuthukisiwe kuphela! Sinenkokhelo yesikhathi esisodwa engu-$25 isilwane ngasinye, esingakhokhwa nge-PayPal noma yengezwe enanini lakho lokubhuka.
Akufanele zishiywe zingagadiwe endlini ngaphandle uma zinekhreyithi. Izinketho zokunakekelwa kwasemini ziyatholakala buza nje..
Izikhwama zikhona sicela uzithathe ngemva kwazo.
Sibheke ngabomvu ukusingatha uhambo lwakho lwe-Yosemite
Izivakashi zikwazi ukufinyelela ikhaya eligcwele, indawo yokupaka kanye nesitezi.
Ehhovisi lesizinda - Usizo lwendawo
Inhliziyo kaWawona eCore of Yosemite National Park.
Ama-Vistas e-Spectacular Glacier Point kanye ne-Yosemite Valley evundile ayisigamu sehora ukuya enyakatho. Ungaqala yonke imizila eya ku-Half Dome, Nevada Falls, futhi ugibele phansi uye eSigodini usuka e-Glacier Point, noma ungaqala kusukela eSigodini. Zikhethele!
I-Mariposa Grove yezihlahla ezinkulu ze-sequoia iyimizuzu eyishumi nje ukuya eningizimu.
I-Yosemite National Park iyindalo kaMama Yemvelo ehlaba umxhwele kakhulu eNtshonalanga emangalisayo. I-Wawona iyimfihlo egcinwe kakhulu ngaphakathi kwe-Yosemite, futhi i-Camp Chilnualna yomlando (ebizwa ngokuthi “Chill New All Na”) e-Yosemite bekuyinhliziyo eshayayo ka-Wawona cishe iminyaka eyikhulu.
Kungakhathaliseki ukuthi yini oyithanda kakhulu nge-Yosemite—kusuka ezimpophomeni zayo ezidumayo, ezigelezayo, kuya kuma-monoliths adumile egwadule nezilwane zasendle ezingenakuqhathaniswa—uzoyithanda i-Wawona ngoba inakho konke ngaphandle kwenqwaba yezivakashi ezihlasela okuhlangenwe nakho kwakho okuyigugu ngaso sonke isikhathi.
- Uvuswe ukuthatha uhambo lomzuzu owodwa ukuya emgodini wokubhukuda ongcono kakhulu ku-Merced River ohlanzekile?
- Uzwe ukugeleza okujabulisayo kwempophoma ye-Yosemite egeza umzimba wakho wonke?
- Uxhume i-trout ye-Yosemite elambile futhi wayiyisa ekhaya ukuze uthole isidlo sakusihlwa senhlanzi eyosiwe esisha kunazo zonke?
- Ubuka ukushona kwelanga okukhazimulayo okubonisa i-Wawona Dome?
- Lala phezu kwetshe legwadle lasendulo futhi ubuke izinkanyezi ze-Zodiac zintweza emkhathizwe?
Laba abambalwa abakhethiwe ohlwini olungapheli lwemizwa ejulile eyenzeka nganoma iluphi usuku lapho uhlala e-Camp Chilnaualna e-Yosemite. Thatha ithuba leminyaka yethu engu-80 yesipiliyoni sokusingatha abahambi e-Wawona.
Emindenini, imbobo yokubhukuda yomfula enamachibi afudumele ehlobo iqhele ngamafidi angu-150. I-Pioneer Yosemite History Centre inezakhiwo zoqobo kusukela ngeminyaka yawo-1800s kanye nebhuloho elimboziwe okulula ukuhambahamba kulo.
Kubadlali begalofu, inkundla yegalofu ye-Wawona iyisifundo esinemigodi engu-9.
Ngebha Yehhotela/Izindawo zokudlela, ungahlala kuvulandi ongaphambili we-Wawona Hotel yakudala, noma uye eSigodini uye e-Ahwahnee Hotel.
Ukuhamba ngezinyawo noma imoto yakho.
Amabhasi amahhala asuka e-Wawona ehlela esigodini sase-Yosemite.
Ulwazi olwengeziwe ku
(iwebhusayithi ifihliwe)(i-imeyili ifihliwe)m
Umndeni wethu ubuphathe abahambi e-Wawona nase-Yosemite National Park iminyaka engaphezu kwengu-80. Sicela uhlanganyele nathi futhi usebenzise ithuba leminyaka yethu yokuhlangenwe nakho ukwabelana ngenjabulo ka-Yosemite nezivakashi zethu.
4.61 · 299 okushiwo abanye
3rd generation Yosemite son, and torch bearer of Camp Chilnualna in Wawona. Yosemite's best unkept secret since 1933. With 150 years of family experiences in Yosemite, I still find…
Sicela uzizwe ukhululekile ukushayela noma ukuthumela umbhalo nganoma yimiphi imibuzo noma okukukhathazayo!
UGarth Ungumbungazi ovelele